Darawal Gaari Qaadsidey oo lagu diley degmada Afgooye | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Darawal Gaari Qaadsidey oo lagu diley degmada Afgooye
Darawal Gaari Qaadsidey oo lagu diley degmada Afgooye
Rag ku labisan dareeska ciidanka dowladda ayaa waxa ay duhurnimadii maanta gaari Qaad siday ku rasaaseeyeen gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Gaarigan ayaa xilliga rasaasta lagu furayay wuxuu marayay inta u dhaxeysa Baar Ismaaciil iyo halka loo yaqaano Taraafikada, waxayna ku aadaneyd waqtiga duhuradii oo ah xilliga uu Qaadka uu yimaado.
Gaarigan oo nuuciisa uu ahaa Caasi ayaa in la rasaaseeyo waxa ay ka dambeysay kadib markii darawalka gaariga waday ay raggan hubeysan ku amreen inuu joojiyo, balse wadaha gaariga ayaa ka dhega adeegay amarka, intaasi kadib ayaa rasaas la huwiyay.
Waxaa la xaqiijiyay in falkan uu ku geeriyooday darawalkii waday gaarigan oo ka baxay magaalada Muqdisho, kuna sii jeeday degmada Afgooye, sidoo kale waxaa dhaawac uu soo gaaray qof kale oo gaariga saarnaa.
Ilaa hadda maamulka gobolka Shabeellaha Hoose kama aanu hadlin falkan lagu waxyeeleeyay dadkan shacabka ah, dhawr mar ayaa sidan oo kale loo rasaaseeyay gaadiidka ay wataan dadka shacabka ah, iyaga oo aan waxba galabsan.